Tartan Isboorti oo lagu soo gaba gabeeyay dagmada Balcad | Radio Muqdisho
Tartan Isboorti oo lagu soo gaba gabeeyay dagmada Balcad
Published on February 2, 2013 by Mowliid · 2 Comments · 1,963 views
Gelinkii dambe ee shalay waxaa degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe lagu soo gebagebeeyey tartan Kubadda cagta ah oo loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka bulshada kaasi oo Seddexdii bilood ee aynu kasoo gudubnay ka socday degmadaasi.
Tartankan oo ay ka qeybqaateen in ka badan Tobon kooxood oo ka dhisan xaafadaha kaladuwan ee degmada Balcad ayaa loogu magac daray isdhexgalka Bulshada kaas oo socday mudo Sadex bilood ah.
Munaasabadii gebagebadii kulankaasi ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Balcad Cismaan Maxamed Xaadoole oo sheegay in tartankan isborti loogu magac daray isdhexgalka Bulshada uu soo abaabulay maamulka degmada Balcad oo gacan ka helaya bahda Isbortiga ee Degmadaasi.
Wixii ka dambeeyay markii maleeshiyaadka Shabaab laga saaray degamada Balcad ayaa waxa soo hagaagay amaanka degmadaasi iyadoo ay dib usoo noolaadeen adeegyadii bulshada ee Degmadaasi.
Naasir balcad says:	February 2, 2013 at 12:23 pm	Waa ilaah mahadii hadii uu ilaah naga saaray Shabaabkii na dhibayay, waxaan u hambelyeynayaa gudoomiye xaadoole iyo bahada sportiga Degmada Balcad oo soo abaabulay Tartankii dhamaaday. Lkn waxaan dhaliil u soo jeedinaa warbaahinta Qaranka oo ka gaabisay shqadii ay u heysay shacabkeeda ku nool BALCAD, Viva Balcad & All Soomaaliya
Reply »	y.s.mukhtaar says:	February 6, 2013 at 6:22 pm	waxaan baaq u dirayaa dhamaan dhalin yarada reer balcad oo runta jaceyl aan uqabo waxaan leeyahay walaalayaal Alle swc wuu idin weydiinaya waqtga iyo halkaad ku bixineysaan ismaan xaadoole ALLE hortiisa idinla tagi maayo ee waqtgiina oga faa ideysta cibaadada ALLAAH swc. hana ku mashquulina fikradaha reer galbeedka cadaawata u haayo muslimiinta